$1,100 တန် Galaxy Fold Lite မိတ်ဆက်လာဖွယ်ရှိတဲ့ Samsung
$1,100 တန် Galaxy Fold Lite ကိုမိတ်ဆက်လာဖွယ်ရှိတဲ့ Samsung
Galaxy Fold Lite ဆိုလို့ Foldable စမတ်ဖုန်းတွေ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ 2019 နှစ်ဆန်းပိုင်းတုန်းက Galaxy Fold ၊ MateX တို့ ရေပန်းစားခဲ့တာ မှတ်မိဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒိမတိုင်ခင် ကွေးညွတ်ထားလို့ရတဲ့ မျက်နှာပြင် တနည်းအားဖြင့် Flexbile OLED နည်းပညာတွေ ပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့တာ သတိထားမိဦးမှာပါ။
ခေါက်ချိုး စမတ်ဖုန်း (သို့) Foldable ဖုန်းကို Pioneer လုပ်ခဲ့တာ Samsung ဖြစ်ခဲ့သလို သိထားရသမျှ ၅ နှစ်ခန့် အချိန်ယူခဲ့ရတယ် ဆိုပါတယ်။ တိုးတက်လာတဲ့ အချိန်ရောက်လာတော့ OLED မျက်နှာပြင်ကို 30° ၊ 80° နဲ့ နောက်ဆုံး 180° အနေထားထိ ကွေးလို့ရလာတဲ့အခါမှာတော့ Flexible ဖုန်းထုတ်ဖို့ ဂွင်တည့်လာတယ် ဆိုရမှာပါ။
The First Fold
သည်လိုနဲ့ Galaxy Fold ဖြစ်လာဖို့ အကြောင်းဖန်လာသလို မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ နှောင်းပိုင်းကာလမှာ စာဖတ်သူတွေ သိထားတဲ့အတိုင်း အခက်ခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် နူးညံ့ပြီး ကျိုးပဲ့လွယ်တဲ့ Flexible OLED ဟာ အကြိမ်ရေ အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ပျက်စီးခဲ့ရသလို CEO ဟောင်းဖြစ်သူ DJ Koh ကိုယ်တိုင်က
အဆင်သင့်မဖြစ်ဘဲ Galaxy Fold ကို ကြေညာခဲ့တာပါ လို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်ပျက်နောက်ပိုင်း Redesigned Hinge နဲ့ အားနည်းချက်တွေ ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် ထင်သလောက် အားမရဖြစ်ခဲ့ဟန် ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ Galaxy S20 Series မိတ်ဆက်တော့ ဦးဦးဖျားဖျား Z Flip ကို ပွဲထုတ်ခဲ့ပြီး နှစ် ၂၀ ကျော်က Flip (Cell Phone) ပုံစံဒီဇိုင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
Horizontal Flip လုပ်တဲ့ Fold သင်ခန်းစာကနေ ဒေါင်လိုက် ခေါက်လို့ရတဲ့ Flip ဖုန်းကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး အမှားယွင်းနည်းစွာနဲ့ ချပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Flip ဆိုတဲ့အတိုင်း Flexible OLED ဟာ အကြိမ်ရေ အကန့်သတ်နဲ့သာ ကွေး၊ ခေါက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်လို့ ဘယ်လိုပြောမလဲ နုသေးတယ်ပေါ့။
တတိယ မျိုးဆက်အဆင့် ရောက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ Z Flip မှာ ကျိုးပဲ့ ပျက်ဆီးတာမျိုး အဖြစ်နည်းပြီး အောင်မြင်ခဲ့တယ် ဆိုရပေမယ့် Samsung ကတော့ ဇွဲလျှော့ဟန် မရှိသေးပါဘူး။
အခုတဖန် ပေါက်ကြားလာတဲ့ သတင်းက Fold Lite ပဲ ဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၁,၁၀၀ ခန့်ရှိမယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ Original နဲ့ ယှဥ်ရင် ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပဲ ကွာတဲ့အပြင် S20+ 4G တစ်လုံးရောင်းစျေးနဲ့ သွားညီပါတယ်။
Foldable ဖုန်းလို Luxury Class တွက် တန်ဖိုးက အဓိကပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လောက် Flexible ဖြစ်ပြီး ကွေး၊ ခေါက်တဲ့ Pressure ဒဏ် ခံနိုင်လဲပဲ စကားပြောမှာဖြစ်လို့ Fold Lite မှာ ဘာထူးခြားချက် ရှိနိုင်လဲ?
ကောလာဟလတွေအရ Fold2ကိုလည်း စမ်းသပ်နေတယ်လို့ သိရပြီး ဇဝေဇဝါ ဖြစ်စေတာ Foldable နည်းပညာ နောက်တစ်ခုလား? အခုအနေထားအရ Fold Lite ရဲ့ အတွင်း Display မှာ UTG (Ultra Thin Glass) မပါဘူးဆိုထားတဲ့အတွက် Image Quality ပိုင်း အားနည်းဟန်ရှိပါတယ်။
Image: Future CDN
နောက်တစ်ချက်က Galaxy Fold ရဲ့ အပြင်ဖက် Display (4.6”) ထက် ပိုသေးမယ့် Secondary Screen အသုံးပြုထားနိုင်တယ် ဆိုထားလို့ Fold Lite ဖြစ်သွားဟန် ရှိပါတယ်။
Construction ပိုင်းမှာ Original Fold အတိုင်း အလူမီနမ် သတ္ထုကိုယ်ထည်နဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး အတွင်းဖက်ကိုတော့ ပလတ်စတစ်သားနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် Literally အတူတူပဲလို့ သုံးသပ်ရသလို Galaxy Fold Lite မှာ သုံးလာမယ့် Hinge System အတွက် တစ်စုံတရာ ပေါက်ကြားထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။
I have some info on the Galaxy Fold Lite.
-Galaxy Fold Lite 4G
-Mirror Black, Mirror Purple
-Display has no UTG
-Will be equipped withamix of 2018/19/20 parts
-outside will probably haveasmaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip)
ဒါကြောင့် ပြောဖို့စောနေသေးသလို Samsung ကနေ ကြေညာတဲ့အခါမှ Fold နဲ့ ဘာကွာသွားလဲ ဝိုက်လို့ပိုကောင်းမှာပါ။ သိထားရသလောက် Snapdragon 865 အသုံးပြုလာနိုင်ပြီး Lite ဖြစ်တဲ့အတွက် 4G နဲ့ပဲ မြင်ရမယ့်ကိန်းရှိတယ်လို့ ကနဦး Leak တွေအရ သိရပါတယ်။
Source: Twitter ၊ GSMArena
မြန်မာငွေ ၁၉၉,၀၀၀ ကျသင့်မယ့် HUAWEI MatePad T8 Tablet
2020 အတွက် အဖွင့်လှခဲ့ပေမယ့် ရောင်းအား မလှမပ ဖြစ်နေတဲ့ Sony Mobile